အမေ ရိကန် က အဘ သားသမီး တွေ အလှည့် လာဦး မှာ လား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမေ ရိကန် က အဘ သားသမီး တွေ အလှည့် လာဦး မှာ လား?
အမေ ရိကန် က အဘ သားသမီး တွေ အလှည့် လာဦး မှာ လား?
- နေ ဘုန်းလျံ
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Jul 3, 2010 in News |4comments
Share/Save/Bookmark သြစတြေးလျ နိုင်ငံ၌ စာရင်းကိုင် ပညာသင်ကြား နေသည့် မဇင်မွန်အေး သည် စီးပွားရေးအရ အရေးယူ ဒဏ်ခတ် ထားသော စာရင်းဝင် တဦး ဖြစ်နေသည့် အတွက် မကြာမီ ရက်ပိုင်း အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သြစတြေးလျ ပြည်ထောင်စု တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ထို မဇင်မွန်အေး တဦးတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ ပြည်ပတွင် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ သားသမီး များစွာ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။ ဧရာဝတီ ဆိုက် မှ ဖေါ် ပြသည်။
About နေ ဘုန်းလျံ
နေ ဘုန်းလျံ has written 41 post in this Website..
I know that but I don't know everythings
View all posts by နေ ဘုန်းလျံ →
ကောင်းတယ် အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်သင့်တယ် ။ တခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားသမီးတွေလည်းကျန်သေးတယ်ဆိုရင် အရေးယူဦးလေ ။
ဘာဖြစ်ဖြစ်မိဘအကူညီမယူခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ညာတာပါ ။ သူတို့ သားသမီးတွေကောင်းစားနေတာ ဘာကိုမှီပြီးနေတာလဲလို့ လူတိုင်းသိတယ် ။
aung ba says:
နိုင်ငံနဲ့အ၀ှမ်း စာမသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေမှ မနည်းမနောဖြစ်နေတာ ………..ပညာမသင်ရတော့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိဘဲ လူရယ်လို့မှမဖြစ်ရသေးဘူး ကိုယ့်ဝမ်းစာကိုယ်ရှာစားရင်း အရွယ်က နို့နံ့မစင်သေးဘူး ပါးစပ်နဲ့ အပြုအမှုက ရိုင်းစိုင်းမှုကမ်းကုန်အောင်ပညာကုန်တက်ကုန်တဲ့ကလေးတွေကိုယ်စား ဒီကိစ္စမျိုးက ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
စာသင်မှထမင်းစားရတဲ့ဘ၀မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူဆိုတော့ ပညာမသင်ရတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်တိုင်း ဒင်းတို့ကို အမှုန့်ချေပစ်ချင်တယ်…………….
သူတို့လိုလူမျိုးတွေပညာတက်တော့ကော နိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်လား ဝေးသေး……….
သူတို့ပညာသင်နေတာ မိဘ ပိုက်ဆံကင်းပါတယ်ဆိုတာ ချီးစားပြမယ် ကျိန်ပြောရင်တောင်မယုံဘူး ချီးစားချင်လို့လို့မှတ်လိုက်မယ်
အေးသတ္တိရှိရင် ဗမာသတ္တိရှိရင် မိဘပိုက်ဆံမပါဘဲ အဲဒီကိုရောက်ပါတယ်လို့ သွေးအန်ပါစေလို့ ကျမ်းသာကျိန်ခိုင်းလိုက်
ဘာလို့ဆို ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမမြင်ချင်အဆုံးသူတို့ အကြောင်းသိနေတာကိုးဟ